မလေးရှား အွန်လိုင်း ရေဒီယို မီဒီယာ ပထမဆုံးတည်ထောင်သူ ကိုနေဇော်လင်း နှင့် ရွှေအက်ဒမင် ကျော်ဇင် တို့ ၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်
ရွှေမြန်မာဥယျာဉ် သုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပျော်ပါးဆင်နွဲ သွေးဒါနလှူဒါန်းပွဲ
Css Format Submit Button by Free-Buttons.org v2.0
Web Button Samples by Free-Buttons.org v2.0
Loading feed	အမျိုးကောင်းသား
Loading feed	တေးသံသာ
Ecovision Business Jurnal
Myanmar Time for English
Css Format Submit Button by Free-Buttons.org v2.0 ကြည့်ရှုခံစား ဗွီဒီယိုများ
mr_bean_falls_asleep_in_church တင်ဆက်သူ မင်းထိုက်0Comments
MrBean_d64a_w_3 တင်ဆက်သူ မင်းထိုက်0Comments
Charlie Chaplin - The Lion's Cage တင်ဆက်သူ မင်းထိုက်2Comments
၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၀ ကြာသပတေးနေ့တွင် တည်ထောင်သည်
ရွှေမြန်မာဥယျာဉ်မှူးများကိုမေးလ်ပို့ချင်ရင်အောက်ကပြထားတဲ့ Email ဆိုတာလေး ကလစ်ပေးလိုက်တာနဲ့ မေးလ်ပို့လို့ရပါပြီ...
☆ရွှေမြန်မာဥယျာဉ် Toolbar Download☆
♣Toolbar Download လုပ်နည်းလေးပါ
“ သိလိုသည်များ ဒီနေရာမှာမေးပါ ”
မနောရွှေစင် ပရဟိတ အလှူပွဲ မှတ်တမ်း
မီးလောင်ဗုံးသင့် ဒါဏ်ရာရ သံဃာတော်များသို့ ရွှေမြန်မာဥယျာဉ် မိသားစုမှ အလှူရှင်များအာကာမိုးနိုင်+မသဇင်မာ = RM 100
ညီလင်းနိုင် = RM 50
ဆန်းထက်အောင် နှင့် ကိုဟန်ထွန်း = RM 150
ဒီဇင်ဘာဘွိုင်းလေး နှင့်ဇနီး = RM 50
ကျော်ဇင် = RM 100
------------------------------------- ၁၂၀၀၀၀ ကျပ်
ခိုင်မာ (khaingmar) = ၆၀၀၀၀ ကျပ်
တောသူမလေး = ၂၀၀၀၀ ကျပ်
ကိုဝင်းထွဋ်ဦး+မခိုင်ဇာအောင် = ၂၀၀၀၀ ကျပ်
ကျော်ဇင်ဦး+မနှင်းအေးလွင် = ၁၀၀၀၀ ကျပ်
မိုးတိမ် + ဇော်ချစ်သူ = ၁၀၀၀၀ ကျပ်
ဥယျာဉ်မှူးလေး = ၁၀၀၀၀ ကျပ်
မနှင်းအေးလွင်နှင့် သူငယ်ချင်းများ = ၁၀၀၀၀ ကျပ် ချောချော = ၁၀၀၀၀ ကျပ်
ကြာဖြူနွယ်(ဆုံဆည်းရာ) = ၁၀၀၀၀ ကျပ်
GOODBYE = ၁၀၀၀၀ ကျပ်
မြူနှင်းမှုန် = ၁၀၀၀၀ ကျပ်
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ရွှေမြန်မာဥယျာဉ် အင်တာဗျူး ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
► ကိုယ်ပိုင်အတွေး ကိုယ်တိုင်ရေး စာစုများ
Android ဖုန်းအတွက် မခေါ်စေချင်တဲ့ ဖုန်းတွေ SMS တွေ ပိတ်နည်း
ရေးသားသူ နေသာ - မေ 24, 2013 at 6:14pm 1 Comment
ရေးသားသူ chit ko - မေ 24, 2013 at 3:06pm2Comments
ရေးသားသူ လသာဖြိုးအောင် - မေ 24, 2013 at 2:34pm3Comments
ကဆုန်လပြည့် တို့ ဘုရားမွေးနေ့ ..........ကမ္ဘာကြီးအလင်းတွေ့ သောနေ့ 
ရေးသားသူ လသာဖြိုးအောင် - မေ 24, 2013 at 1:16pm2Comments
ရေးသားသူ goodbye - မေ 24, 2013 at 11:21am2Comments
ရေးသားသူ တတိုင်းမွှေး - မေ 24, 2013 at 9:12am4Comments
☻☻☻ ဒီ နေ့…… ☻☻☻
ရေးသားသူ အရိပ်မင်း - မေ 23, 2013 at 6:50pm3Comments
အ၀တ်အစား အလှအပနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ အမြင်....
ရေးသားသူ ကိုအောင်သက် - မေ 23, 2013 at 3:00pm2Comments
ရေးသားသူ ကျော်နေနိုင် - မေ 23, 2013 at 1:01pm2Comments
( အတိတ်ပန်းချီ )
ရေးသားသူ တာယာဂျလေဘီ - မေ 23, 2013 at 12:10pm2Comments
( မှောင်မိုက်တဲ့ မာယာ )
ရေးသားသူ တာယာဂျလေဘီ - မေ 23, 2013 at 11:49am3Comments
ရေးသားသူ Kyi - မေ 23, 2013 at 1:30am4Comments
ရေးသားသူ အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) - မေ 22, 2013 at 8:31pm0Comments
Chatroom Admin ကွန်ပျူတာလောက (ဗဟုသုတ)
ရေးသားသူ kyawshein - မေ 22, 2013 at 6:23pm4Comments
ရေးသားသူ စံပယ်ဖြူ @Nant Thin Thin Hmwe - မေ 22, 2013 at 5:50pm2Comments
ရေးသားသူ ရဲမော် - မေ 22, 2013 at 4:00pm4Comments
( ( မာနစစ်မြေပြင်မှာ မြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့ရသော ) )
ရေးသားသူ တာယာဂျလေဘီ - မေ 22, 2013 at 12:34pm6Comments
ကြိုဆိုရေး အက်ဒမင် လက်ကိုင်ဖုန်းဘက်ထရီအဟောင်းကို ပြန်သုံးနိုင်နည်း
ရေးသားသူ Thi Thi Cho - မေ 22, 2013 at 9:44am 8 Comments
ကြိုဆိုရေး အက်ဒမင် လက်ချောင်းလေးတွေ အသုံးပြုပြီး ဝေဒနာ ကုသ ကြည့်ရအောင်
ရေးသားသူ Thi Thi Cho - မေ 22, 2013 at 9:30am 8 Comments
ကြိုဆိုရေး အက်ဒမင် လေယာဉ်ကိုအနီးကပ်မြင့်ရသည့် နယ်သာလန်က Sint Maarten ကမ်းခြေ
ရေးသားသူ Thi Thi Cho - မေ 22, 2013 at 9:22am4Comments
အားလုံးကြည့်မည် Css Format Submit Button by Free-Buttons.org v2.0 ဒီနေရာမှာဆွေးနွေးကြမယ်
တင်ဆက်သူ ချေစုရှိန် ၏ ဆွေးနွေးပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ မနီ 16 နာရီ အကြာက. 8 Replies
တင်ဆက်သူ ဆရာကြီး ၏ ကစားပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ pyaesone ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က. 307 Replies
Android အတွက် VZO Chat လာပါပြီ
တင်ဆက်သူ ♪♥ ♪ ပါရမီ ♪♥ ♪ ၏ မိတ်ဆက်ပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ ချေစုရှိန် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က.4Replies
တင်ဆက်သူ ဆရာကြီး ၏ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ mondyjue မေ 17. 26 Replies
တင်ဆက်သူ အိသဇင်အောင် ၏ မိတ်ဆက်ပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ aungphyooo မေ 13. 236 Replies
တင်ဆက်သူ ချေစုရှိန် ၏ ဆွေးနွေးပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ san tint မေ 9. 12 Replies
တင်ဆက်သူ မြတ်လေးသဇင် ၏ ဆွေးနွေးပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ kyawshein မေ 9. 1 Reply
တင်ဆက်သူ Leo Hero ၏ ဆွေးနွေးပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ နိုင်လင်း မေ 8. 33 Replies
၁၅၀၀ တန် CDMA ဖုန်း ( Android handset အမျိုးအစား) များအတွက် အင်တာနက် Setting ထည့်နည်း
တင်ဆက်သူ ♪♥ ♪ ပါရမီ ♪♥ ♪ ၏ ဆွေးနွေးပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ k.ketu009@gmail.com မေ 1.3Replies
တင်ဆက်သူ Leo Hero ၏ ဆွေးနွေးပွဲ. နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးချက် ရေးသူ u ye aung ဧပြီ 7. 207 Replies
ဆွေးနွေးပွဲ ကစားပွဲ စကားရည်လုပွဲ ဥာဏ်ရည်စမ်းပွဲ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ စာများတင်ရန် နေရာ *အခြားစာများ တင်ခွင့်မပြုပါ*
ကိုယ့်ပုံသူ့ ပုံ အလှစုံ
အငြိမ့်စင် ၊ အမှတ်တစ် ၊ အမှတ်နှစ် ၊ အမှတ်သုံး ၊ အမှတ်လေး ၊ အမှတ်ငါး
Css Format Submit Button by Free-Buttons.org v2.0 အပမ်းဖြေသူများ လှုပ်ရှားမှု အခြေအနေ
Top News · Everything မောင်မင်းဦး ပြန်လည်ရေးသားသည် က တတိုင်းမွှေး'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'မီးခိုးဖြစ်သွားသောအချစ်များ.....'"ခံစားသွားပါတယ် သယ်ရင်း"2 နာရီ အကြာကမောင်မင်းဦး ပြန်လည်ရေးသားသည် က Kyi'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'မပြိုင်ခင်က အရှံး'"သိထားဖို့က ဒူးထောက်ပြီးအရူံးပေးဒါကိုဂေါင်းပေါတော့တက်မနင်းလိုက်ပါနဲ့ အရမ်း ကြိုက်တယ်"2 နာရီ အကြာကမောင်မင်းဦး ပြန်လည်ရေးသားသည် က တာယာဂျလေဘီ'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် '( မှောင်မိုက်တဲ့ မာယာ )'"စိတ်တိုင်းကျစရာအမြားကြီးကြူံခဲ့ရတာပဲ"2 နာရီ အကြာက♪♥ ♪ ပါရမီ ♪♥ ♪ ပြန်လည်ရေးသားသည် က တတိုင်းမွှေး'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'မီးခိုးဖြစ်သွားသောအချစ်များ.....'"like"3 နာရီ အကြာက♪♥ ♪ ပါရမီ ♪♥ ♪ liked တတိုင်းမွှေး's blog post မီးခိုးဖြစ်သွားသောအချစ်များ.....3 နာရီ အကြာကlwinthein ပြန်လည်ရေးသားသည် က chit ko'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'အဆင်မပြေတဲ့မြန်မာများအတွက်ပါ(ဖတ်ပေးကြပါ)'"good"3 နာရီ အကြာကအချစ် shared chit ko's blog post on Facebookအဆင်မပြေတဲ့မြန်မာများအတွက်ပါ(ဖတ်ပေးကြပါ)5 နာရီ အကြာကလင်းသီဟ liked လသာဖြိုးအောင်'s blog post ကဆုန်လပြည့် တို့ ဘုရားမွေးနေ့ ..........ကမ္ဘာကြီးအလင်းတွေ့ သောနေ့ 5 နာရီ အကြာကmay zaw ပြန်လည်ရေးသားသည် က လသာဖြိုးအောင်'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ကဆုန်သစ္စာကမ္ဘာတည်သရွေ့ တည်စေသား'"thankx for that."7 နာရီ အကြာကkyawthiha shared လသာဖြိုးအောင်'s blog post on Facebookကဆုန်သစ္စာကမ္ဘာတည်သရွေ့ တည်စေသား7 နာရီ အကြာကkyawthiha liked လသာဖြိုးအောင်'s blog post ကဆုန်သစ္စာကမ္ဘာတည်သရွေ့ တည်စေသား7 နာရီ အကြာကsoemoetain ပြန်လည်ရေးသားသည် က လသာဖြိုးအောင်'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ကဆုန်သစ္စာကမ္ဘာတည်သရွေ့ တည်စေသား'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်........."7 နာရီ အကြာကရွှေအက်ဒမင်december boylay ပြန်လည်ရေးသားသည် က ရဲမော်'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ရင်တွင်းရှိုက်သံ'"ဖူးစာ နတ်မင်းရေ.............အမြန်ဆုံးသိအောင် ဆောင်ကြဉ်း ပေးလိုက်ပါ.............."7 နာရီ အကြာကsoemoetain ပြန်လည်ရေးသားသည် က လသာဖြိုးအောင်'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ကဆုန်လပြည့် တို့ ဘုရားမွေးနေ့ ..........ကမ္ဘာကြီးအလင်းတွေ့ သောနေ့ '"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..........."7 နာရီ အကြာကရွှေအက်ဒမင်december boylay ပြန်လည်ရေးသားသည် က chit ko'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'အဆင်မပြေတဲ့မြန်မာများအတွက်ပါ(ဖတ်ပေးကြပါ)'"အခုလိုစိတ်ရှည်စွာ ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။။။။။။။။။။"8 နာရီ အကြာကChatroom Adminkyawshein ပြန်လည်ရေးသားသည် က လသာဖြိုးအောင်'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'ကဆုန်သစ္စာကမ္ဘာတည်သရွေ့ တည်စေသား'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်......"8 နာရီ အကြာကchit ko postedablog postအဆင်မပြေတဲ့မြန်မာများအတွက်ပါ(ဖတ်ပေးကြပါ)အခက်အခဲကြုံကသစ္စာပြုခြင်း(၁၄-ရက်နှင့်၃၀-ရက်)အကြား ဖော်ပြပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါက အောင်မြင်ရပါစေမည်ဟု အာမခံပါသည်။မိမိကိုယ်တိုင်၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်(၁)ကြိမ်၊၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်(၁)ကြိမ် ဘ၀တွင် ဒေါင်ချာ စိုင်းလောက်အောင် အခက် အခဲကြုံခဲ့ရပါသဖြင့်ရွှေကျင်သာသနာပိုင်ချုပ် ရွှေဟင်္သာဆရာတော်ဘုရားကြီး သြ၀ါဒပေးတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင်အခက်အခဲများမှလုံးဝလွတ်မြောက်ခဲ့သည့် အပြင် ထူးခြားသောတိုးတက်မှု့ နှင့် ထူးခြားသောဖြစ်စဉ်များကို ကြုံဆုံခဲ့ရပါသဖြင့်အခက်အခဲကြုံတွေ့ပါက သစ္စာပြုနိုင်ပါရန်…See More8 နာရီ အကြာက 2
လသာဖြိုးအောင် posted blog postsကဆုန်သစ္စာကမ္ဘာတည်သရွေ့ တည်စေသားကဆုန်လပြည့် တို့ ဘုရားမွေးနေ့ ..........ကမ္ဘာကြီးအလင်းတွေ့ သောနေ့ 8 နာရီ အကြာကkyawsoenwe71 liked လသာဖြိုးအောင်'s blog post ကဆုန်လပြည့် တို့ ဘုရားမွေးနေ့ ..........ကမ္ဘာကြီးအလင်းတွေ့ သောနေ့ 8 နာရီ အကြာကရွှေအက်ဒမင်december boylay ပြန်လည်ရေးသားသည် က နေသာ'ရေးသားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် 'Android ဖုန်းအတွက် မခေါ်စေချင်တဲ့ ဖုန်းတွေ SMS တွေ ပိတ်နည်း'"ကျေးဇူးပါ။။။။။။။။။။။"8 နာရီ အကြာက နောက်ထပ် ... RSS
ရွှေမြန်မာဥယျာဉ်မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါ၏ရွှေမြန်မာဥယျာဉ်
ဒီနေရာမှာ မှတ်ပုံတင်ပါဒါမှမဟုတ် ဒီမှာဝင်ပါ
created this Ning Network. Goldenmyanmar Paradise likes
မေးလ်ကနေပြီး ပို့စ်များစောင့်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် သင့်မေးလ်လိပ်စာဖြည့်လိုက်ပါ ။ အသစ်တင်တိုင်းပို့ပေးပါ့မယ် ။
ဒီနေရာမှာ သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်ခေါ်၍ ရပါသည်
အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အတူ အံ့ဩဖွယ်ရာအချက် (၁၁)ချက် (ဆောင်းပါး)
9 ယောက် ၀င်ထားသည်
Golden Games Group
16 ယောက် ၀င်ထားသည်
MP3 Crazy Group
29 ယောက် ၀င်ထားသည်
Graphic Design groups
34 ယောက် ၀င်ထားသည်
79 ယောက် ၀င်ထားသည်
32 ယောက် ၀င်ထားသည်
ဗဟုသုတ ၀ါသနာရှင်များ အသင…
45 ယောက် ၀င်ထားသည်
39 ယောက် ၀င်ထားသည်
သတင်း နဲ့ ဂျာနယ်ဝါသနာရှင…
14 ယောက် ၀င်ထားသည်
21 ယောက် ၀င်ထားသည်
မြန်မာ့ လက်မှုပညာ ရပ်ဝန်း
24 ယောက် ၀င်ထားသည်
10 ယောက် ၀င်ထားသည်
26 ယောက် ၀င်ထားသည်
122 ယောက် ၀င်ထားသည်
GiveaGift chanlinsoe
GiveaGift cherry
GiveaGift Dဂျေ
GiveaGift koko
GiveaGift langle
GiveaGift LIN THU
GiveaGift marmarminn.2809
GiveaGift Mcဒိုးကြီး
GiveaGift minzagyi
GiveaGift naing zaw
GiveaGift NayNor
GiveaGift nilar win
GiveaGift shinkyarnyo
GiveaGift thanhtun
GiveaGift Theingi Nwai
GiveaGift wai mar
GiveaGift Ye Yint Moe
GiveaGift ရွှေလက်ရာဆုရှင်
►အမှတ်တရ ဒိုင်ယာယီ (လွမ်းဧကရီ)
►ပိတောက် နဲ့ သင်္ကြန်(ခိုင်လေး(ရွှေတောင်))
► မျက်ရည်မိုး(khaing mar)
►ရင်ခုန်သံတွေ ထုံမွှန်းထားတဲ့ ရွှေသီတင်းကျွတ်ညလေး aye aye( မလေးငယ် )
►***ရွှေရည်လူး တဲ့ နွေတန်ခူး***(အဖြူရောင်)
Sign in or Join Google